mercredi, 20 avril 2016 21:28
Anjijaomby – Sambava : Lehilahy iray maty tampoka nandritra ny famotorana azy
Nahiahiana ho nangalatra lavanila maitso ity raimpianakaviana ity, tamin’ny nahitan’ny Fokonolona lavanila nandrahoina tao aminy nefa tsy mbola misokatra ny taom-piotazana lavanila any amin’ny Faritra SAVA.
mercredi, 20 avril 2016 21:07
Z’Ovy Vakinankaratra : Navadika ho hetsika ara-toekarena ho an’ny Faritra
Noraisin’ny Faritra Vakinankaratra an-tanana ny fikarakarana ny hetsika Z’Ovy 2016. Navadika ho hetsika ara-toekarena tanteraka izy io ankehitriny ary na ny anarany aza dia efa “Foire Economique Régionale Z’Ovy 2016” ao Vakinankaratra fa efa navalona ny “Festival” nitondrana ny hetsika tany am-piandohana.
mardi, 19 avril 2016 23:29
Fakana an-keriny Karana : Mpandraharaha akaikin’ny fitondrana no atidoha
Mivoatra ny raharaha manodidina ilay fakana an-keriny an’i Shane Kourdjee, mpandraharaha teratany karana tao Antsirabe, nitranga ny alin’ny alakamisy 14 aprily raha teny an-dalana hody any an-tranony rehefa avy nivavaka tany amin’ny Mosquée.
mardi, 19 avril 2016 09:08
Cisco Antsirabe II : Mitaky ny tambinkaramany ireo mpampianatra FRAM
Nafanafana ny sehatry ny fampianarana tao Antsirabe omaly. Tonga nitaky ny tambinkaramany ireo mpampianatra FRAM avy amin’ny Cisco Antsirabe II. Raha ny fanazavana nomen’Atoa Ratovonjanahary Njakasoa Robert, mpandrindram-paritry ny ANNEFA Vakinankaratra dia tsy miova ny fitakian’izy ireo dia ny fanohanana ireo ZAP efatra tamin’ny “Subvention 1er Bimestre », ho an’ireo mpampianatra miisa 134 avy amin’ny ZAP Soanindrariny, ZAP Tsarahonenenana-Sahanivotry, ZAP Vinanikarena ary ZAP Sahanivotry-Manandona, miampy ny “bimestre” telo izany ankehitriny, na tambinkarama valo volana raha atontaly.
lundi, 18 avril 2016 10:46
Antaninarenina – Befotaka : 10% ny ankizy ihany no miditra an-tsekoly
Antaninarenina, lasa Kaominina tamin'ny taona 1996 raha Fokontany tao anatin'ny Kaominin'i Befotaka taloha. Na dia ratsy dia ratsy aza ny lalana dia tongan'ny moto sy fiara tsy mataho-dalana aleha ihany i Antaninarenina.
Page 89 sur 114